2010 May « नेपाली मुटु
उधारो सहमती र भोलीको युद्ध
Posted by नेपाली मुटु on May 28, 2010
सोचे जस्तै भयो आखिर । हुन पनि हाम्रा नेताहरु हामीद्धारा चुनिएका हाम्रा प्रतिनिधीहरु हाम्रो सोचाई भन्दा पर जाने त कुरै भएन । यसैले हामीले सोचे जस्तै समय सकिन एक घण्टा बाँकी रहदै सहमतीमा संविधानसभाको म्याद थपिने भयो । एक किसीमको यो सहि नै हो । हाम्रा नेताहरु झगडा गर्ने र भत्ता पचाउँने प्लेटफर्म अझै बाँकी नै रह्यो तर उधारो सहमतीमा । भोली गरिहाल्ने भनेर भएका सहमती यि दलहरुले दुई बर्ष अगाडिबाट नै गर्नेछौं भनेर हजार पटक बाचा–बन्धन र संकल्प गरेका हुन तर भयो के हाम्रो अगाडि घाम जत्तिकै झर्लङ्ग छ ।
अन्त्यमा सबै दलले भने जस्तै माओबादीले आफ्नो संविधानसभा प्रतिको मोह पुष्टि गरेरै छाड्यो । माधवकुमारहरुले तन, मन र वचनले पुष्टि गरिदिए कि संविधानसभाको लागि माओबादी जे गर्न पनि तयार छ Continue Reading उधारो सहमती र भोलीको युद्ध >>
हिजो बुद्ध जयन्ती : आज क्रुद्ध सन्तती
अहिले रातको १२ बजिसकेको छ । आफ्नो काम गर्ने समय केहि बचाएर यो आधारातमा म कम्प्युटरको किबोर्ड बजार्दैछु । मलाई यो रात केहि लामो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको छ । तर समय मेरो वास्ता गरेर मेरो लागि रोकिने होइन । मलाई अहिले आफ्नो सानो काम भन्दा देशको हालतको बढि चिन्ता लागिरहेको छ । अब हाम्रो सपना उम्रने साझा थलो संविधान सभाको समयअवधि सकिन २४ घण्टा पनि बाँकी रहेन । यो काउन्टडाउन सँगै सँधै शान्तिमा रमाउँन खोज्ने नेपालीमनको सपना धुलिषाद हुन लागिरहेको छ । यो सोचेर मलाई निदाउँन गा¥हो भइरहेको छ । कसैलाई लाग्ला यो बेकारको संवेदना हो, तर अशान्तिको त्यो ताण्डव र आफ्नाबाट आफ्नै मारिएको सुनेर तर्सिनु पर्ने भयावह समय फेरि आउला कि भन्ने डर त पक्कै बेकार नहोला । आधारातमा आएको सर्चमा आफ्नै नाम भन्न पनि भक्भकाउँनु पर्ने दिनको त्रासदी पक्कै पनि बेकार नहोला । यही डरमा म अनिदो छु । भोली उठ्न अलिक ढिलो भयो भने बन्दुकको कुन्दा ज्यानमा बर्जिन नपाओस् भनेर कम सुत्ने रिहर्सल गर्दैछु । मेरो भविष्य लेख्छु भनेर काटमाण्डौको भिडमा हराएका मेरा नेताहरु पनि म जस्तै अनिदो नै होलान् र ? Continue Reading हिजो बुद्ध जयन्ती : आज क्रुद्ध सन्तती >>
Posted in चुप लाग्न नसक्दा | 1 Comment »
खुल्यो बाटो संविधान संशोधनको तर….
Posted by नेपाली मुटु on May 24, 2010
राजनीतिक सहमतिबाट संविधानसभाको म्याद थप्न वैधानिक अड्चन नभएको निचोड निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधान संशोधनको बाटो खुला गरिदिएको छ।
न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले आइतवार राजनीतिक सहमतिबाट अन्तरिम संविधान जारी भएको स्मरण गराउँदै सुविधा सन्तुलन र अपुरणीय क्षतिको दृष्टिकोणले पनि म्याद थप्न सकिने निर्णय दिएको हो।
संविधानको धारा ६४ ले दुई वर्षभित्रै संविधान बनाइसक्नुपर्ने परिकल्पना गरेकाले संविधान संशोधन गर्नु असंवैधानिक हुने र त्यो अधिकार राजनीतिक दललाई नभएको दाबी गर्दै बैशाख २ गते भरत जङ्गमले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारले अवैध रुपले संविधान संशोधनका लागि संसदसमक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेकाले उक्त कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। इजलासले अन्तरिम संविधान निर्माणको पृष्ठभूभी र दिशा नर्देशको व्ष्याख्या गर्दै रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नरहेको निर्णय सुनाएको छ । Continue Reading खुल्यो बाटो संविधान संशोधनको तर…. >>
संविधानसभाको पक्षमै नभएका प्रधानमन्त्री
Posted by नेपाली मुटु on May 22, 2010
एक पटक विचार गर्नुहोस् त पौडिन नजान्ने मान्छेलाई करौडौको हिरा नदि पारी लगिदे भनेर दियो भने के हुन्छ ? मान्छे डुब्छ, हिरा हराउँछ, उद्देष्य प्राप्ती हुदैन । त्यस्तै भयो हामीसँग । हामी पीर गरेर बसिरहेका छौं किन बनेन हाम्रो संविधान भनेर । हामी नेपालीको साझा सपना हो संविधान । यसका लागि भनेर धेरै नेपालीको रगत र पसिना बगेको छ । तर यो समयमा नबन्ने नै भयो । किन थाहा छ ? हामीले पौडिन नजान्ने मान्छेलाई हिरा दिएर नदि पारी लगि’दे भनेछौं ।
माओवादीको सरकार ढल्ने बित्तिकै देशमा संविधान बनाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रि भएका माधवकुमार नेपालले संविधान जारी गरिसक्नु पर्ने समय ६ दिन मात्र बाँकी रहदा भने, ‘म त संविधानसभाको पक्षमा भएको मान्छे नै होइन । खाली माओवादीलाई खुसी पार्न मञ्जुर भएको हुँ । मलाई त संविधान अर्कै तरिकाबाट बनाउँन मन थियो Continue Reading संविधानसभाको पक्षमै नभएका प्रधानमन्त्री >>
मिडिया समाजका मान्छेहरु भेट्न जाँदा प्रधानमन्त्रीले यस्तो खालको कुरा गरेका थिए रे प्रत्यक्षदर्शीले सुनाए अनुसार- Continue Reading माधव नेपाल त ‘गैँडा’ भइसके रे >>
गएको मास नेपाली राजनितीमा एउटा तरङ्ग दौडिएको स्पष्ट देखियो । बिभिन्न कोणबाट अनेक दृष्टिकोणहरु छापामा र जनमानसमा देखिन थाल्यो । यो ध्रुविकरणको सुरुवात हो भनेर अड्कल काट्नेहरु पनि प्रशस्त देखिन थाले । देशमा कुनै अनिष्टको भय मडारिन थाल्यो । सरकार पक्ष र विपक्षमा बाँडिन थालेको स्थितीमा नेपाली राजनितीमा मझधारको नेतृत्व गर्दै देखा प¥यो, उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघं र अरु सघं सस्थाहरु । माओबादीले गरेको अनिश्चितकालिन आमहडतालको विरोध र सहमतीको सरकारका लागि गरिएको भनिएको शान्ति सभाबाट सरकार धेरै खुसी भएको थियो । सरकारले यही खुसीमा सार्वजनिक घोषणा ग¥यो, ‘आमहडताल माओबादीले फिर्ता लिए हामी राजिनामा दिन तयार छौं ।’ उसको यो घोषणाले माओबादीलाई आमहडताल फिर्ता लिन दबाब दियो । जनताका बिरुद्धमा जनता उतारिने अबश्था बढ्न थाल्यो । अन्ततः माओबादीले आमहडताल नैतिक जिम्मेदारी भन्दै स्थगीत ग¥यो र बल सरकारको कोर्टमा रहेका जानकारी दियो । Continue Reading के गर्लान् महासघंहरुले ? >>
तिमी जातका कुरा गर्र्छौ म त मान्छे एक भन्छु
परैबाट आँखा तर्र्छौ म त मान्छे एक भन्छु ।
त्रि्रोजस्तै रूप-रङ्ग, भावना छ तिमीजस्तै
अन्धविश्वासमात्रै छर्र्छौ म त मान्छे एक भन्छु ।
Continue Reading तिमी जातका कुरा गर्र्छौ म त मान्छे एक भन्छु >>
बिबाहले गर्दा घरै छाडिन् बालिकाले
Posted by नेपाली मुटु on May 13, 2010
बालबिबाहको कारणले नेपालमा धेरै खालका समस्याहरु देखिन्छन् । सामाजिक सभ्यताको लागि यो एउटा कलकं हो भने बालबिबाहबाट ति बालबालिकाको मनस्थिती, जीवन र स्वास्थ्यमा पर्ने असर त अपुरणीय हुन्छ । यो विसङ्गतीबाट अहिले पनि प्रताडित हुनेको संख्या निकै नै ठुलो छ । भर्खर मात्र सुर्खेतमा यस्तै सभ्यतालाई चुनौती दिने घटना भएको छ । आफ्नो असामयिक बिबाहको तयारीबाट बच्न एउटी बालिकाले गरेको प्रयास तारिफ योग्य छ । तर उनको जस्तो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने समस्या हामीहरुको पनि हो । उनको यो ‘विद्रोह’लाई हामीहरुले समर्थन गर्न सकेमा र यसलाई सही हो भनेर समाजमा स्थापित गराउँन सकेमा मात्र यसले सही समाधान पाउँने छ । Continue Reading बिबाहले गर्दा घरै छाडिन् बालिकाले >>